Create Yahoo Mail 🤑 login.yahoo.com - Yahoo Mail Up ကို Sign
အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုချင်တယ်, ထိုအခါ Yahoo Mail Create သငျသညျဖို့အကောင်းဆုံးအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ထားတဲ့အကောင့်ကို. သငျသညျအပြီး get အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ် Yahoo Mail Up ကို Sign. ဤဆောင်းပါးသည်သင်တို့ကိုငါ ပတ်သက်. ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ပေးဖို့ဖန်တီး Yahoo ကအကောင့်ကိုဖန်တီးနည်း.
ဤတွင်အဘို့ခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်အကောင်းဆုံးနှင့်ပြည့်စုံခြေလှမ်းကိုသင်ရှာတွေ့ Yahoo Mail အကောင့်ကို Create. လည်း, မတူညီသော features တွေကို Yahoo ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက် Yahoo Mail များအတွက် Up ကို Sign သူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများပေး. ခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်ခြေလှမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာကဖြည့်စွက်.
ဤဆောင်းပါးတွင်ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ, များအတွက်ပြည့်စုံမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ရ တစ်ဦးကို Yahoo မေးလ်အကောင့် Create. သင်တစ်ဦးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တူသောကိရိယာလိုအပ်, laptop, သို့မဟုတ်ပါကအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူစမတ်ဖုန်းအွန်လိုင်းဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ရန်.
Yahoo က! ဖြစ်သောအမေရိကန်ကို web service provider ကဖြစ်ပါတယ် ဇန်နဝါရီလအတွင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1994 နှင့် ဂျယ်ရီယန်းနှင့်ဒါဝိဒ် Filo တည်ထောင်ထားတဲ့. ဒါဟာ Sunnyvale အတွက်ရုံးချုပ်, ကယ်လီဖိုးနီးယား, U.S. Yahoo Mail သည့် Yahoo ကပေးန်ဆောင်မှုများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ရာဟူးမေးလ် အတွက်ဖြန့်ချိသောအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် 1997 အရာလေးခုကွဲပြားခြားနားသောအီးမေးလ်ကအစီအစဉ်များနှင့်တကွကြွလာ. သူတို့ထဲကသုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပြီးတဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဖြစ်၏.
Yahoo Mail အင်္ဂါရပ်များ
ကွဲပြားခြားနားသောအောက်ကဖော်ပြထားထုတ်စစ်ဆေး Yahoo Mail အင်္ဂါရပ်များ သူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများသည်. လူအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါရပ်များကိုဂရုတစိုက် Read.
နယူးအေဂျက် interface ကို,
ထိုအ tabs များ
Yahoo Mail အကောင့်ကို Create | အဆင့်အပြီးအစီးလမ်းညွှန်အားဖြင့်အဆင့်
မှအောက်ပါဖော်ပြချက်ပြည့်စုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလိုက်နာပါ Yahoo Mail အကောင့်ကိုဖန်တီး. ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်ခြေလှမ်းထွက် Check နှင့်အောင်မြင်စွာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်.
တရားဝင် Yahoo Mail က်ဘ်ဆိုက်ထဲဝငျဖို့ပေးထားသော link ကိုပထမဦးစွာကလစ်: login.yahoo.com
ယခု, ယင်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “အကောင့်ပြုလုပ်ပါ” အဆိုပါသင်္ကေတပြ Up ကိုဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန် option ကို.
ယခု, သင်သည်သင်၏ပထမအမည်ထည့်သွင်းရန်ရှိသည်, မြိုးရိုးအမညျ, အီးမေးလိပ်စာ, Password ကို, မွေးရက်, နှင့်ကျားအလွန်ဂရုတစိုက်.
မှန်မှန်ကန်ကန်နှိပ်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုထည့်သွင်းပြီးနောက် “ဆက်လက်” ကြယ်သီး.
ယခု, သင်သည်သင်၏အကောင့်လုံခြုံရေးနှင့်စာနယ်ဇင်းအဘို့သင့်ကို Mobile number ကိုရိုက်ထည့်ရန်ရှိသည် “ဆက်လက်”.
အောင်မြင်စွာပြီးနောက်သင့်ရဲ့ Yahoo Mail အကောင့်ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးဖြည့်စွက်.
အကြီးအသုံးပြီးအားကောင်းတဲ့သင့်ရဲ့ Yahoo Mail Password ကို Make, စာလုံးအသေး, တောလည်ရာ, နှင့်အထူးဇာတ်ကောင်. ဒါကဟက်ကာကနေသင့်ရဲ့ Yahoo Mail အကောင့်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တကယ်အရေးကြီးပါတယ်.
ဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်. ပြီးပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်ပေးသွားမှာပါ Yahoo Mail အကောင့်ဖန်တီးနည်း. ခြေလှမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းထွက် Check နှင့်အောင်မြင်စွာကဖြည့်စွက် Yahoo Mail Up ကို Sign အကောင့်. လည်း, Yahoo Mail account ဖန်တီးပြီးပြီးနောက်သင်ရရှိသည့်အင်္ဂါရပ်များကိုဖတ်ရှု.
သင်ဤ post ကိုအကြောင်းကိုမဆိုရှိပါကသင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များနှင့်လည်းမေးမြန်းချက် Give. ငါတို့သည်သင်တို့ဖို့အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်ပေးချင်တယ်အဖြစ်. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု www-hotmail-com.email fသို့မဟုတ်ပုံမှန် update.
အောက်မှာ Filed: ဆိုင်းအပ် အတူ Tagged: Yahoo ကမေးလ် Create, 'to yahoo အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံ, 'to yahoo mail ကို sign up ကို